कर उठाउने ठाउँमा को ? « janaaastha.com
कर उठाउने ठाउँमा को ?
प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७७, बुधबार १२:२०
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरको घर पायक गण्डकी सरुवा भएपछि नयाँ महानिर्देशकको खोजी भएको छ । कुँवर घर पायक पारेर पोखरा गएपछि महानिर्देशकमा केही वरिष्ठ सहसचिवहरूको खोजी र रुची बुझ्न थालिएको बताइन्छ । अहिले विभागको महानिर्देशकमा सबैभन्दा धेरै दाबेदारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीको देखिन्छ ।
त्यसैगरी चन्द्रकला पौडेललाई पनि अर्को दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । उद्योग विभागका बलराम रेग्मीले पनि आफू दाबेदार रहेको संकेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजश्वको महानिर्देशकमा मुख्य गरी मैनाली, पौडेल र रेग्मी तीनजना प्रमुख दाबेदार देखिएका हुन् ।
बलराम रेग्मी उद्योगभन्दा पहिले अर्थमै थिए । उनी ठूला करदाता कार्यालयको हाकिमसमेत भएका थिए । उपसचिवमा पनि उनी राजश्वतर्फका नै थिए । रेग्मीलाई करका जानकारहरूमध्येको एक भनिन्छ । हुन तः अहिले चर्चामा आएका तीनैजना करका जानकार र क्याडर रहेको बताइन्छ ।
दीर्घ मैनाली बिराटनगर र बानेश्वर कार्यालयमा रहँदा करमा कडा गरेको भन्दै तहल्का मच्चिएको थियो । त्यसैले कर छली गर्न रुचाउनेले उनलाई हतपति मन पराउँदैनन् । बलराम रेग्मीचाँहि नेकपा नेता दिनानाथ शर्माका भाञ्जी ज्वाईं हुन् । चन्द्रकला पौडेल स्याङ्जाकी हुन् । उनलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकटको ठानिन्छ । तर, चन्द्रकलाले पाएसम्म र मिलेसम्म मन्त्रालयतिरै बस्ने इच्छा राखेको स्रोतको दाबी छ ।